थाईल्याण्डले फेला पार्यो कोरोना भाइरसको औ’षधी …पूरा हेर्जुहोस !
एजेन्सी । थाईल्याण्डका चिकित्सकले आफूहरुले बुहान कोरोना भाइरसबाट सं’क्रमित भएकी एक बिरामीलाई सफलतापूर्वक निको पारेको बताएका छन् । तिनले विभिन्न भाइरसको उपचारमा अहिले नै उपलब्ध औ’षधीलाई मिसाएर खान दिदाँ बि’रामीलाई सन्चो भएको जानकारी दिए ।
‘म अत्यन्त जटिल अवस्थामा रहेकी बि’रामीको उपचारमा संलग्न थिएँ र परिणाम सकारात्मक आएको छ । ४८ घण्टाभित्रै बि’रामीको स्वास्थ्य अवस्थामा तिव्र सुधार भएको छ र प’रीक्षणको परिणाम पनि ४८ घण्टाभित्र पोजिटिभबाट ने’गेटिभमा फेरिएको छ ,’ डा. क्रियाङसकले भने ।
अस्पताल प्रशासनले यो खबर सार्वजनिक गर्नको लागि पत्रकार सम्मेलन नै आयोजना ग¥यो । पत्रकार सम्मेलनमा अस्पतालका अधिकारीले निको भएको बि’रामीको स्वास प्रणालीमा अहिले कुनै भाइरस नदेखिएको बताए ।
उता, बेइजिङका अस्पतालहरुले केही बि’रामीलाई एचआईभी उपचारमा प्रयोग हुने औ’षधी दिएर निगरानी गरिरहेको थिए । तर यसले प’रिणाम बाहिर आएको छैन ।